प्रचण्डको खुलासाले बालुवाटारमा खैलाबैला, लाग्यो गम्भीर आरोप ! - Media Dabali
प्रचण्डको खुलासाले बालुवाटारमा खैलाबैला, लाग्यो गम्भीर आरोप !
रुकुम पश्चिम - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई ०७० सालको निर्वाचनमा बम प्रहार गर्ने साथीहरूलाई गृहमन्त्री बनाएर ठूलो गल्ती गरेको खुलासा गरेका छन् ।
रूकुम पश्चिम जिल्लामा मंगलबार आयोजित माओवादीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले आफूलाई गद्धार भन्ने र बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरेको भन्दै पछुताए ।
दाहालले आफूलाई कसले बम प्रहार गरेको नाम उल्लेख नगरे पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि उनको संकेत थियो । दाहालले पार्टी छाडेर गएका र पुनः फर्केकाहरूलाई आफूले माथिल्लो तहमा जिम्मेवारी दिनु गल्ती भएको पनि बताएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले आफू पुनः जनताका काखमा आइपुगेको बताएका छन् । दाहालले आफूलाई दुःखमा बचाउने नेता तथा कार्यकर्ता पछि परेकोमा आत्मआलोचना गरेका छन् । ‘म आत्मआलोचना गर्न आएको हुँ ।
मलाई दुःखमा बचाउने र सहयोग गर्ने तथा अप्ठरो पर्दा प्रचण्ड भन्नेहरू ओझेलमा परेका छन्’, दाहालले भने, ‘जाली, फटाहले भाउ पाएजस्तो भयो ।’ ‘इमान्दार कार्यकर्तालाई पार्टी, नियुक्तिहरू र मन्त्री बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मैले गल्ती गरेँ’, माओवादीका अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् । उनले भने, ‘शहीद परिवार ओझेलमा परेजस्तो भयो भने जनयुद्धमा त्याग गर्नेहरू पनि ओझेलमा परे । अब म त्यस्तो गर्दिनँ । हिजो युद्धमा लागेकालाई अगाडि बढाउने संकल्प गर्छु ।’